Fanapahana noraisin’ny HCC: efa nampoizin’ny KMF/Cnoe ny «Azo raisina fa tsy mitombina» - ewa.mg
Fanapahana noraisin’ny HCC: efa nampoizin’ny KMF/Cnoe ny «Azo raisina fa tsy mitombina»
News - Fanapahana noraisin’ny HCC: efa nampoizin’ny KMF/Cnoe ny «Azo raisina fa tsy mitombina»
Tsy niandry ela na efa mahazatra
aza. Nitondra va­lin-kafatra avy hatrany manoloana ny fanapahana
noraisin’ny HCC amin’ny fitoriana nataony ny eo anivon’ny KMF/Cnoe.
« Efa nampoizina ihany io fanapahana io taorian’ny fanambarana
nataon’ny filohan’ny HCC tamin’ny mpanao gazety, ny alarobia lasa
teo. Gaga izahay satria efa hita soritra mialoha ny valiny navoaka
ampahibemaso nefa toa mbola tsy nandeha akory ny fitsarana ny
raharaha », hoy ny fanambaran’izy ireo, omaly. Mazava anefa ny
fahitan’ny KMF/Cnoe ny raharaha fa voahitsakitsaka ny zo maha
mpifidy ireo olomboafidy sasany, mbola miandry ny valin’ny raharaha
eny anivon’ny filankevi-panjakana. Ho very zo ireo kaominina sasany
mbola tsy nahavitana fifidianana, hatreto.
Tsy azo ivalozana ny didin’
Tsy mahazo ny hasina sy ny zo
tokony ho azy ny vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana
sasany : faritra sy ny faritany, efa tokony hipetraka ka hanana
mpifidy nefa mbola tsy manana olona voafidy araka ny
Lalàm­pa­no­renana, hatramin’izao. Eo koa ny tsy fanajana ny
lalàm-pifidianana ny amin’ny fotoana tokony hanatanterahana
Na izany aza anefa, niaiky ny KMF/Cnoe fa tsy azo ivalozana ny didy
sy ny fanapahana navoakan’ny HCC ka tsy maintsy hirosoana ny
fifidianana. Naneho fahavononana handray anjara amin’ny
fanaraha-maso ny fifidianana ho avy izy ireo. “Mba ho fifidianana
tsy handiso fanantenana. Manainga ny mpisehatra rehetra mba hanaja
sy hampanaja ny lalàna manan-kery”, hoy ihany izy ireo.
Tsiahivina fa samy tsy afa-bela amin’ny “Azo raisina fa tsy
mitombina” ny fitorian’ny KMF/Cnoe sy ny Anteni­mi­e­ran­­doholona,
navoakan’ny HCC, omaly.
L’article Fanapahana noraisin’ny HCC: efa nampoizin’ny KMF/Cnoe ny «Azo raisina fa tsy mitombina» a été récupéré chez Newsmada.
Lalaon’ny Nosy 2019: samy naneho ny hafaliany ny rehetra
Nivalona tanteraka, ny andiany faha-10 tamin’ny lalaon’ny Nosy (JIOI 2019), notanterahina tany Maorisy. Any Maldives, indray ny fotoana manaraka, afaka efa-taona. Samy naneho ny heviny, tamin’ny fandraisany anjara, tamin’iny fihaonana iny avokoa ireo atleta sendra ny gazety Taratra. Niraisan’izy ireo, kosa ny hafaliana Sary Noré-Razafinjatovo Jean Honoré, mpanazatra taranja volleyball: “Efa niezaka sy niady mafy ny ekipa malagasy,nisy ny fivoarana, saingy ny fahamatorana sy ny fifantohana no tsy ampy. Tokony ho azontsika ny laharana voalohany, saingy nisy fahatahorana kely ihany ny mpilalao malagasy, indrindra nanoloana ireo mpijery marobe nanohana ny mpifanandrina. Na izany aza, faly fa afaka niatrika tsara ny lalaon’ny Nosy”. -Rasoambolanoro Ange, mpilalao taranja basikety: “Faly fa nahazo fandresena, nitondra medaly volamena ho an’i Madagasikara. Ity no lalaon’ny Nosy farany hatrehiko, afa-po aho ary mitsodrano ny zandry isany hahavita be amin’ity taranja ity. Mahay ny mpilalao malagasy ary afaka manandratra avo ny fanevam-pirenena raha manana tanjona ny handresy. Rehefa miady tsy maintsy mandresy”. -Randafiarison Rosina, atleta taranja fibatana fonjamby: “Nahafinaritra ny fiatrehana ny lalaon’ny Nosy tamin’ity andiany faha-10 ity. Efa nivonona ny hahazo fandresena ary nivoady mafy ny hitondra medaly volamena hiverina an-tanindrazana. Afa-po satria tratra ny tanjona ary afaka mirehareha fa nanandratra avo ny voninahi-pirenena. Tanjona hafa indray izao no banjinina amin’ny fiatrehana ireo lalao iraisam-pirenena maro”. -Razafindralambo Zo (Lino), mpilalao tenisy ambony latabatra : “Nahafaly ary nahafinaritra fa nahavita soa aman-tsara ny fifaninanana. Ambony be ny teknika ny lalao, tamin’ity raha oharina ny tamin’ny efa-taona lasa, indrindra ny taranja tenisy ambony latabatra. Soa fa nahazo vokatra tsara ihany isika izay tena nahafa-po satria tena ambony ny lentan’ny mpifanandrina. Manana tombony ny mpifanandrina amin’ny fanomanana, lesona azo notsoahina izany, tsy ampy intsony ny fiomanana enim-bolana mialohan’ny lalao, mila hampitomboina ihany koa ny fifaninanana iraisam-pirenena, mba hananana fahazarana”. Nangonin’i Mi.Raz L’article Lalaon’ny Nosy 2019: samy naneho ny hafaliany ny rehetra a été récupéré chez Newsmada.
Fitantanana minisitera: tsy olom-baovao eo amin’ny fahasalamana ny Pr Rakotovao
Voatendry ho minisitra vaovao hisahana ny Fahasalamana ny Pr. Rakotovao Jean Louis, nisolo toerana ny Pr. Ahmad Ahmad. Efa nisahana andraikitra ambony maromaro teo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana ny tenany. Anisan’izany ny naha tale jeneralin’ny CHU rehetra manerana ny Nosy azy. Tsy tao anatin’ny minisiteran’ny Fahasalamana ihany fa efa tomponandraikitry ny famolavolana ny paikady sy ny raharaha sosialy tao amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony ity profesora ity. Tsy olom-baovao ho an’ny mpiara-miasa rehetra eo anivon’ny fahasalamana izy satria nifanerasera matetika amin’ny tontolon’ny fitsaboana sy ny fahasalamana. Anio maraina ny famindrana ny fitantanana ho an’ny minisitra vaovao handray ny toerana eny amin’ny foiben’ny minisitera, Ambohidahy.Vonjy L’article Fitantanana minisitera: tsy olom-baovao eo amin’ny fahasalamana ny Pr Rakotovao a été récupéré chez Newsmada.
Pilo kely #4483 aroson’i Mamy Be
L’article Pilo kely #4483 aroson’i Mamy Be est apparu en premier sur AoRaha.
Kilemaina voatosika tao anaty taxibe : Tokony hiakatra Fitsarana omaly ny raharaha fa nahemotra indray
Azo lazaina fa fahakiviana tanteraka ny nahazo ny mpitory,izay tsy iza fa lehilahy manana kilema ara-batana ka niharan’ny lozam-pifamoivoizana teo Ambohijatovo, raha tonga teny amin’ny Fitsarana Anosy omaly maraina mba hiatrika Fitsarana. Nahemotra amin’ny 11 Febroary indray ny Fitsarana momba io lozam-pifamoivozana nahazo azy io rehefa nangataka izany ny mpisolovavan’ilay orinasam-piantohana miadidy ilay fiara nahavanon-doza taminy. Nahagaga ihany izany satria raha dinihina ny zava-misy dia tsy dia misy idiran’ny orinasa fiantohana loatra angamba ny zava-nitranga tamin’ity lehilahy ity izay tsorina fa mpamao gazety ao amin’ny orinasan-tserasera iray eto Andrenivohitra na dia sembana aza. Raha tsiahivina ny tantara dia fiara mpitatitra ao main’ny zotra 161 no mifanandrina aminy amin’izao raharaha izao. Araka ny fitantarany, niandry bus 161 teo Ambohijatovo (Arrêt eo amin’ny Boky) izy tamin’ny Alatsinaina 22 oktobra 2018 fa handeha hody avy niasa. Maro ny olona niandry teo ka mba isan’ny nisisika teo izy rehefa naka sisiny amin’ny fijanonana iny ilay fiara. Hitan’ilay resevera izay tao anaty fiara fa sembana eo amin’ny tongotra ranamana ka noraisin’ity voalohany tamin’ny sandriny mba hanampiana azy hiakatra tao anaty fiara. Nandeha tampoka anefa ny fiara ary namonjy ny “fil” ilay hidina ho any Andohan’Analakely iny. Somary notarihin’ilay receveur kely sahabo ho iray metatra na mahery kely teo ity mpanao gazety ity, izany hoe lasa tafiditra any amin’ny faritry ny arabe, araka ny fitantarany. “Nefa dia navotsiny aho avy eo fa ny varavarana no novonjeny nohidina haingana” hoy izy nanazava araky ny fitoriana izay napetrany teo anivon’ny Fitsarana. Maika hitsoaka ilay taxibe 161 iray hafa vao tonga avy aorianany angaha ilay mpamily fa sao tratran’ny “adversaire” no nampitroatra azy tampoka, raha araka ny filazan’ireo olona nanatri-maso. Vokatr’izay, niakarapoka nianjera tamin’ny arabe ity olona sembana ity. Fa ny tena loza dia saika voahitsaky ny fiara iray hafa nisosa tao aorian’io taxibe saika niarahany io, saingy tsara hisatra ity farany ka afaka nijanona tampoka. T.M.L’article Kilemaina voatosika tao anaty taxibe : Tokony hiakatra Fitsarana omaly ny raharaha fa nahemotra indray a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Noraisim-potsiny! Tratra ireo jiolahy roa mpangalatra bizo mipetaka amin’ny lalam-pirenena 32 mihazo an’i Mandritsara. Nandritra ny fisafoana nataon’ny zandary ny alin’ny 10 oktobra misasakalina no nahasamborana ireto jiolahy ireto teny amin’ny RN 32 PK 145+200. Taorian’ny fanentanana nataon’ny zandary manamoroana iny lalam-pirenena iny no nanaitra ny andrimasom-pokonolona ao Antanankely, fokontany Andampihelo, ka nahafahana nisambotra ireto jiolahy ireto. Nandositra avy hatrany ry zalahy raha vantany vao nahatazana ireo fokonolona. Tavela kosa ny bizo miisa dimy niaraka amin’ny sarety saika hitondrana azy ireo. Tratra ny roa amin’ireo olon-dratsy taorian’ny fikarohana nataon’ny zandary avy ao amin’ny “poste fixe” Besakana sy ny polisy misahana ny fandikan-dalàna. Niaiky ny heloka vitany izy roa lahy taorian’ny famotorana nataon’ny zandary ka nanambaran’izy ireo tamin’izany ny namany roa mpiray tsikombakomba amin’izao asa ratsy izao. Nanamafy ny zandary fa efa maro ny fanentanana natao mikasika ny famongorana ity raharaha halatra bizo amin’ny lalam-pirenena any avaratra ity fa mbola misy ihany ireo minia mandika izany ka tsy maintsy ampiharina ny sazy ho an’ireo manapotika fotodrafitrasa sy fananana iombonana toy izao.Jean ClaudeL’article RN 32 mihazo an’i Mandritsara: voasambotry ny zandary ireo jiolahy mpangalatra bizo a été récupéré chez Newsmada.
Volley-CAVB: lany ho filoha ramatoa Bouchra Hajjij
Tontosa soa aman-tsara, omaly, ny fifidianana eo anivon’ny kaonfederasiona afrikanina ny volley ball. Lany ho filoha hitantana mandritra fe-potoana fitondrana manaraka ramatoa Bouchra Hajjij, filohan’ny federasiona maraokanina ny taranja volley ball. Isam-bato 42 no ho 12, nanoloana ny Dr Amr Elwani, filoha nitantana teo alohany, ny azon’i Bouchra Hajjij, nandritra ny fifidianana, natao tamin’ny alalan’ny “visio-conférence”. Marihina fa nanomboka ny 24 oktobra teo ny kongresin’ny CAVB ka federasiona avy amin’ny firenena miisa 51 eto Afrika ny niatrika izany tany am-panombohana. 53 kosa ireo filohana federasiona nanatanteraka ny fifidianana, omaly alatsinainy, ary isan’izany ny filohan’ny federasiona malagasy ny volley Ball, Andriamanantena Tahiana Nirina. Tsy nanadino ny niarahaba ity filoha vaovaon’ny CAVB ity ny filohan’ny FMVB, i Tahiana Nirina, ary nirary soa azy. Tsiahivina fa firenena telo ny tsy niatrika ny kongresy (i Djibouti, i Erithré ary i Ginea), saingy firenena iray ihany kosa ny tsy nanatanteraka ny fifidianana, omaly.Nialoha ny fifidianana, nisy ny tatitra nataon’ny mpitantana teo aloha, mahakasika ny zava-bita nandritra ny fotoam-piasan’ny Dr Amr Elwani sy ny mpikambana niaraka aminy. Ankoatra ny zava-bita, nisy koa ny tatitra vola, efa fanao rehefa tapitra toy izao ny fotoam-piasana. Samy miandrandra fampandrosoana ho an’ny taranja volley ball eto Afrika ireo federasiona, amin’izao nahazoana filoha mpitantana vaovao sady vehivavy izao.Mi.RazL’article Volley-CAVB: lany ho filoha ramatoa Bouchra Hajjij a été récupéré chez Newsmada.
Naiditra am-ponja vonjimaika i Johary Ravoajanahary
Naiditra vonjimaika am-ponja eny Antanimora, omaly, ny tale jeneraly teo aloha ny Ofisin’ny radiom-pirenena sy ny televizionina malagasy (ORTM), i Johary Ravoajana­hary. Anisan’ny niahiahiana azy ny fanodinkodinam-bo­lam-panjakana teo anivon’ny fitantanana ny haino aman-jerin’ny fanjakana tamin’ny fotoan’ny fifidianana filoham-pirenena 2018 ireny. Anisan’ ny voarohirohy koa ny mpiara-miasa aminy iray, nisahana ny “marketing” eo anivon’ny ORTM. Tsiahivina fa nandray an-tanana ny fanadihadiana ny eo anivon’ny Bianco ary nano­lotra izany indray ny eo ani­von’ny Tendrom-pitsarana mi­sahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac). Nilatsaka ny didy, ny 14 oktobra teo, fa arahi-maso ara-pitsarana ny tenany. Niverina teny Ambo­hibao indray ny raharaha ary tonga tetsy 67 ha ka izao notanana vonjimaika am-ponja izao. Tsiahivina fa mpanao gazety, mpanao fanadihadiana, mpamokatra fandaharana i Johary Ravoajanahary. Efa indroa voatendry ho tale jeneralin’ny ORTM ny tenany. Teo ny tamin’ny Tetezamita, sy ny novambra 2016 hatra­min’ny avrily 2019.Synèse R.L’article Naiditra am-ponja vonjimaika i Johary Ravoajanahary a été récupéré chez Newsmada.
Faribolana Sandratra: tontosa ny « Résidence poétique »
Tontosa, ny asabotsy 24 oktobra teo, tany Manjakandriana, ny fihaonambe poetika na ny « résidence poétique », nataon’ny Faribolana Sandratra. 62 ireo mpiray faribolana avy amin’ny sampana manerana ny Nosy. Fotoana nandinihana ny fanatsarana sy ny pitsompitson-javatra tokony hotanterahin’ny rehetra. Ny maraina, nanterin-dRanöe fa tsy fikambanana fa “Faribolana” ny Sandratra. Miara-midinika, manapa-kevitra, miara-matanteraka, mifandranitra mba hampisandratra ny zavakanto, tsy ekena ny gaboraraka amin’ny fomba fisainana ho an’ny olona mikirakira haisoratra ».Ny hariva kosa, niompana tamin’ny famoaham-boky Edisiona Sandratra ny dinika. “ Ampirisihina isika mpiray faribolana hiditra ao anatin’ny Omda. Heverin’ny olona ho ny hira ihany ny zavakanto kanefa be dia be ny mpangalatra asa soratra etsy sy eroa”, hoy i Nalisoa Ravalitera. Nofaranany tamin’ny “Zara fahalalana” hampiakatra avo kokoa ny lentan-tsoratry ny mpiray faribolana izany.Nangonin’i HaRy Razafindrakoto L’article Faribolana Sandratra: tontosa ny « Résidence poétique » a été récupéré chez Newsmada.